Ụlọ Elu Nchekwa Elu Elu China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ na-eme ka ụlọ elu dị elu,Ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ,Ọnụ Ụlọ Nche
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọnụ ụzọ nkwụsị elu > Ụlọ Elu Nchekwa Elu Elu
Ihe Nlereanya.: HF-W1442
T ọ stacking ụzọ nwere ọrụ dịgasị iche iche ndị dị otú ahụ dị ka okpomọkụ ichebe, oyi na-atụ ichebe, ụmụ ahụhụ na ihe àmà, windproof, dustproof na soundproof. O nwere ike izute nhazi akụrụngwa dị elu na ebe obibi nhicha, chebe ike ma melite oyi. Nwepu na mmechi oghere dị elu, melite arụmọrụ ọrụ na àgwà gburugburu ebe obibi. Ọnụ ụzọ na-ebu ọnụ na-adaba maka ọnụ ụzọ buru ibu ma nwee ike ijide ifufe na-agba ọsọ n'elu ogo 10.
Ndabere: Oghere ọnụ ụzọ kpuchiri ụzọ nwere ike ịnweta ngwa eletriki na ntuziaka iji hụ na nke ahụ nwere ike iji aka.
Na - eji ígwè ọkụ eletrik SNMA nke Taiwan, isi ike 220V, ike 0.75kw, ibu ebu ibu S4 nke ukwuu
Na-eji Denish Denmark Ọ bụrụ na igbe nkwado nkwado dị elu, na nhazi na usoro njikwa ihe ndị ahụ, njikwa njikwa dị elu; Onye na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro (150% 1Hz), PLC na-ejikọta, nwere arụmọrụ dị elu, ntọala siri ike, nkwụsi ike dị elu, àgwà dị elu, ebe dị elu. Ugboro oge na-ejikwa nkà na ụzụ na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro, nwere mmalite dị nro, ọrụ nkwụsịtụ ngwa ngwa , mkpuchi ahụ ụzọ na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ ndụ.
N'akụkụ ala nke oghere ọnụ ụzọ, a na-emepụta elekere eletrik ọkụ eletrik na-agbanye otu ụzọ, n'okpuru ọnụ ụzọ ámá ahụ kwụsịtụ ma ọ bụrụ na mmadụ na ihe gbochire foto ahụ, ọkpụkpụ ụzọ abụghị ebe. (South Korean Otto Nix)
A na-ejide windo ígwè ntanye ákwà ntanye ákwà ntanetị, na-eme ka mgbapụta na-arịwanye elu .
1. Ụgbọ mmiri
Actorylọ ọrụ na-agba nnukwu ọsọ na-emechi ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ na-eme ka ụlọ elu dị elu Ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ Ọnụ Ụlọ Nche Ngalaba na-eme ka ụlọ elu dị elu Ụlọ ahụ na-eme ka ụlọ nchekwa dị na alumini Ụlọ a na-echekwa ụlọ elu a kwadoro Ụlọ na-echekwa ụlọ Ngalaba na-eme ka ọ dị elu